VIDEO: Malema piles more misery on Mnangagwa’s govt, threatens to storm Zim embassy with 50 000 men | My Zimbabwe News
Home Videos & Pics VIDEO: Malema piles more misery on Mnangagwa’s govt, threatens to storm Zim...
VIDEO: Malema piles more misery on Mnangagwa’s govt, threatens to storm Zim embassy with 50 000 men
Economic Freedom Fighters Secretary of International Relations says his party will be organizing about 50 000 South Africans to shut down the Zimbabwe Embassy in South Africa if Zimbabwe does not recall its man in Pretoria David Hamadziripi.
The call comes after Hamadziripi issued a statement warning EFF to stop poking its nose on Zimbabwe internal issues after the party criticized President Emmerson Mnangagwa for compensating disposed white farmers.
On Monday, EFF leader Julius Malema has called for the closure of Zimbabwe’s Embassy in South Africa until the human rights’ situation in Zimbabwe has been addressed.
In a tweet, Malema said failure to close the embassy would result in the EFF preventing any Zimbabwean government official from participating in any gathering in South Africa.
Previous article#July 31: Latest on Tawanda Muchehiwa who went missing after being abducted by State security agents
Next articleBREAKING NEWS: President Mnangagwa appoints Dr Constantino Chiwenga as new Health Minister